Nkebi ahịrịokwu kachasị mma maka akaụntụ Instagram gị | Androidsis
Ọtụtụ nde mmadụ nwere akaụntụ na Instagram, nke bụ otu n'ime netwọkụ mmekọrịta ama ama n'ụwa. Netwọk mmekọrịta a bụ ihe ngosi maka ndị mmadụ na ụdị ụwa niile, yabụ ijigide ọnụnọ dị mma dị mkpa. Nke a apụtaghị na ị na -ebugote foto ma ọ bụ ọdịnaya dị mma, mana ederede a na -ebugo dịkwa mkpa maka ikpo okwu. Ọ bụ ya mere anyị ga -eji jiri ahịrịokwu dị mma na Instagram.
Izu ole na ole gara aga, anyị gosiri gị obere akpaokwu ị nwere ike iji na akaụntụ gị na ngwa. Ọ nwere ike bụrụ na ọtụtụ achọghị naanị obere ahịrịokwu, mana ị chọrọ na -achọ ahịrịokwu n'ozuzu ị nwere ike iji na Instagram. Mgbe ahụ anyị ga -ahapụrụ gị nkebi ahịrịokwu ị nwere ike iji ma n'akwụkwọ ị na -ebugo na akaụntụ gị yana na akụkọ ndụ ma ọ bụ na akụkọ nke netwọkụ mmekọrịta.
E nwere ọtụtụ ụdị ahịrịokwu anyị nwere ike iji na akaụntụ Instagram anyị. Maka nke a, n'okpuru, anyị na -egosi gị ahịrịokwu ndị ahụ kewara n'usoro ka ị nwee ike ịchọta ahịrịokwu ndị ga -enye gị ụdị mmasị ị na -achọ na netwọkụ mmekọrịta. N'ezie enwere otu nke dabara ihe ị na -achọ.
1 Nkebi ahịrịokwu ịhụnanya maka Instagram
2 Nkebi ahịrịokwu
3 Nkebi ahịrịokwu
4 Nkebi ahịrịokwu ihe nkiri
5 Ahịrịokwu maka njem na Instagram
6 Ahịrịokwu iji mee mmemme enyi
Nkebi ahịrịokwu ịhụnanya maka Instagram
Ọ bụrụ n'ịhụnanya, enwere ọtụtụ ahịrịokwu anyị nwere ike iji na Instagram nke ị ga -eji mee emume a nke ukwu. Ezi nkwado maka foto ma ọ bụ akụkọ anyị na -ebugo na akaụntụ anyị na netwọkụ mmekọrịta ebe anyị na -ekwu ma ọ bụ gosi onye mmekọ anyị. Ndị a bụ ụfọdụ ahịrịokwu kacha mma anyị nwere ike iji na profaịlụ anyị:
Anaghị m agwa gị na ọ ga -adị mfe, a na m agwa gị na ọ ga -aba uru.
Enwere m ike ịgwa gị ọtụtụ ihe ... Mana ọ bụrụ na i lee anya n'otú m si ele gị anya, ị ga -amaworị ihe niile.
Ịhụnanya bụ naanị okwu. Ruo mgbe mmadụ ga -abịa ịghọta ya.
Naanị ihe m chọrọ bụ obere oge na ọtụtụ gị.
Ọ bụrụ na edere m akwụkwọ nke ndụ m, atụla gị anya ma ọ bụrụ na aha gị pụtara otu nde ugboro.
Anyị abịaghị hụ onye zuru oke n'anya mana onye anyị na -ahụ nke ọma ruo ezughị oke ya.
Ọtụtụ mgbe obi na -ahụ ihe anya anaghị ahụ.
Kwa ụtụtụ, a na m ekele ekele na mụ na gị gafere n'ụzọ.
N'akụkụ gị achọtala m ihe niile m kwesịrị inwe iji nwee obi ụtọ.
Ọ dịghị m mkpa ka m hie ụra n'akụkụ gị ka m nwee ike nwee nrọ.
Inye akwụkwọ anyị ihe ọchị bụ ihe dị mma mgbe niile, ọ bụrụ foto ma ọ bụ vidiyo anyị na -ebugo ma ọ bụ akụkọ. A nwekwara ike iji ahịrịokwu ndị a na -atọ ọchị maka Instagram na akụkọ profaịlụ, ọ bụrụ na ịchọrọ igosi ndị na -eso ụzọ gị akụkụ dị iche nke onwe gị. Ndị a bụ amaokwu ị nwere ike iji:
Drama na -eteta na Sọnde n'elekere 5:30 nke ụtụtụ kama ịlakpu.
Ndị na -amasị nri bụ ndị kacha mma mgbe niile.
Ị nwere ike iche na ị nwere ike iri nri na -enweghị biputere ya na Instagram?
Eyịm na -eme m akwa akwa. Ọtụtụ ndị amaghị ya.
Achọrọ m ezumike ọnwa isii ugboro abụọ n'afọ.
Enwere m mmasị na memes tupu ha abanye na Instagram.
Home bụ ebe WiFi na -ejikọ na akpaghị aka.
Hashtags na -amasị m n'ihi na ha dị ka # waffles.
Gbaa ọsọ ma chụpụ nrọ gị. Ọ bụrụ na ị gaghị erute ha, opekata mpe ị ga -eme egwuregwu.
Obi kwesịrị inwe nhọrọ: Hichapụ kọntaktị, hichapụ akụkọ ihe mere eme ma dozie nsogbu.
Ọ bụrụ na ịhụnanya na -apịa, ọ bụghị nha gị.
Mgbe ụfọdụ ana m echefu mmejọ m: Gịnị bụ aha gị?
Adịghị m umengwụ, anọ m n'ọnọdụ nchekwa ike.
Ụfọdụ alụmdi na nwunye na -akwụsị nke ọma, ndị ọzọ na -adịru ogologo ndụ ha nile.
Ịrụ ọrụ adịghị njọ, ihe ọjọọ bụ ịrụ ọrụ.
Ọ naghị amasị m ịhụ ka ụlọ mebiri emebi, aga m agbanyụ ọkụ ahụ.
Otu n'ime ụdị ahịrịokwu ndị a na -ahụkarị na Instagram ka a na -akpọ okwu mkpali, nke anyị nwere ike ịtụgharị n'asụsụ Spanish dị ka ahịrịokwu na -akpali akpali. Ha bụ ụdị ahịrịokwu ndị a na -achọ ime ka anyị lelee ndụ ma ọ bụ akụkụ ya dị iche iche n'ụzọ ọzọ. A na -ejikarị ụdị ahịrịokwu ndị a mgbe ị na -ebugo mbipụta na netwọkụ mmekọrịta, dịka ị chọpụtala, yabụ ọ dị mma ịmara nhọrọ anyị nwere ike iji n'onwe anyị. Ndị a bụ ihe kacha mma anyị nwere ike iji:
Ihe mgbochi na ndụ na -eme ka anyị tozuo oke, ihe ịga nke ọma na -eme ka anyị na -atụgharị uche, ọdịda na -emekwa ka anyị too.
Jiri ezi obi na ụwa (yana onwe gị), nye ndị maara ka esi ekele ya wee bie ndụ kwa ụbọchị dịka ọ bụ nke ikpeazụ gị.
Ọ bụrụ na ị chọghị nke ukwuu, ọbụlagodi obere ihe ga -adị gị mma.
Amaghị m igodo ịga nke ọma, mana amaara m na isi ihe na -akụda bụ ịnwa ime ihe ga -atọ onye ọ bụla ụtọ.
Ọ ga -akara m mma ịkpọ m asị maka ihe m hụrụ n'anya karịa ihe m na -abụghị.
Ndị mmadụ na -echegbubiga onwe ha ókè banyere ịpụta ịbụ ezigbo mmadụ yana obere ihe n'ịgbalị ịbụ.
Iwu ndị bụ isi iji nwee ezi ndụ: echegbula onwe gị ma ekpela onwe gị ikpe.
Akwụsịla ime ihe ọma naanị n'ihi na onweghị onye nwere ike igosipụta ya.
Tinye ego ugbu a na nrọ nke ọdịnihu.
Ọ bụrụ na ịchọrọ inwe ihe ịga nke ọma, ị ga -amụtarịrị ịda.
Fate na -atụgharị kaadị ma anyị na -egwu egwu.
Ọgụgụ isi anaghị emehie ihe, mana ịmụta ihe n'aka ha.
Ihe ịga nke ọma nwere ọtụtụ nne na nna, ebe ọdịda na -abụkarị nwa mgbei.
Mgbe ihe niile na -emegide gị, cheta na ụgbọelu na -efepụ megide ifufe.
Akwụsịla n'oge gara aga, atụla nrọ maka ọdịnihu, tinye uche gị ugbu a.
Mmadụ nwere onwe ya site na mgbe o kpebiri ịbụ.
Ụzọ nke otu puku kilomita na -amalite site n'otu nzọ ụkwụ.
Iwere ụzọ ọzọ apụtaghị na ị dara.
Ezughị m oke, mana ana m emesi gị obi ike na ọ dịghị onye dị ka m.
Ụda adịghị mma. Ihe ọma anaghị eme mkpọtụ.
Hụ ndụ ị nwere n'anya, ibi ndụ ị hụrụ n'anya.
Nkebi ahịrịokwu ihe nkiri
Ihe nkiri kacha amasị anyị Ha na -ahapụkarị anyị nkebi ahịrị ndị na -aka anyị akara ma na -anọgide na ncheta anyị. Ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị ọrụ na Instagram ji ebugo mbipụta nke ha na -eji ahịrịokwu si na fim, ma ọ bụ ihe nkiri kacha amasị ha ma ọ bụ nke ama ama na akụkọ ihe mere eme. Ndị a bụ ụfọdụ ahịrịokwu ihe nkiri anyị nwere ike iji na akaụntụ anyị na ngwa:
Oge gara aga nwere ike na -afụ ụfụ, mana otu m si ahụ ya, ị nwere ike gbanahụ ya ma ọ bụ mụta ihe
Enweghị ajụjụ a na -azabeghị, naanị ajụjụ ndị ahaziri nke ọma.
Enwere ụzọ atọ iji mee ihe: nke ziri ezi, nke na -ezighi ezi, na nke m.
Ekwela ka onye ọ bụla gwa gị na ịnweghị ike ime ihe.
Ọ bụ ihe ị na -eme ugbu a nwere ike ime nnukwu mgbanwe.
Ekwela ka onye ọ bụla mee ka ọ dị gị ka ị nweghị ihe ịchọrọ.
Mee ya, ma ọ bụ emela ya, mana anwala.
Kedu ihe kpatara ị na -esi ọnwụ ịdị ka ndị ọzọ, ma ọ bụrụ na amụrụ gị ka ị pụọ iche?
Hụ ụwa, chee ihe egwu ihu, mgbidi gafere, bịaruo ndị ọzọ nso, zute ma nwee mmetụta. Nke ahụ bụ ebumnuche ndụ.
Echela maka echi. Jide ụbọchị ahụ, mee ka ndụ gị bụrụ ihe pụrụ iche.
Ahịrịokwu maka njem na Instagram
Instagram bụ saịtị ebe foto ma ọ bụ akaụntụ raara nye njem, njem ma ọ bụ njem na -akakarị. Foto njem na -achọkwa ahịrịokwu kwesịrị ekwesị, nke n'ọtụtụ ọnọdụ nwere ike nwee nnukwu nghọta miri emi, na -achọ izo aka na njem nke ndụ n'onwe ya bụ, dịka ọmụmaatụ. Ndị a bụ ụfọdụ ahịrịokwu njem anyị nwere ike iji mgbe anyị na -ebugo foto na akaụntụ Instagram anyị:
Ọ bụghị ebe ị bịarutere kama ọ bụ ihe ị na -amụta n'ụzọ.
Ọ bụrụ na ị chere na njem dị ize ndụ, nwalee usoro a na -eme. Ọ na -anwụ anwụ.
Njem njem bụ naanị ihe ịzụtara na ọ na -eme gị ọgaranya.
Dị ka ọgwụ ọjọọ niile, ime njem chọrọ mmụba ọgwụ mgbe niile.
Ọ bụrụ na ịgaghị ugwu ahụ, ị ​​gaghị enwe ike ịnụ ụtọ ihe nkiri ahụ.
Ihe dị mkpa abụghị ihe ị na -ele, kama ihe ị na -ahụ.
Ahịrịokwu iji mee mmemme enyi
Na -eme ememme ndị enyi anyị Ọ bụ ihe ọtụtụ mmadụ na -eme na Instagram. Ma ọ bụ bulite foto ma ọ bụ akụkọ raara nye onye nwere nnukwu uru nye anyị ma ọ bụ naanị n'ihi na anyị na -achọ ime ememme ịdị adị nke ndị a ma ọ bụ ọbụbụenyi anyị nwere. Enwere ahịrịokwu anyị nwere ike iji mee ihe n'akwụkwọ anyị na netwọkụ mmekọrịta. Ndị a bụ ahịrịokwu kachasị mma na ngalaba a:
Ezi oge na ndị enyi na -eme ara na -eme oge dị ịtụnanya.
Ọbụbụenyi abụghị ihe ị na -amụta n'ụlọ akwụkwọ. Ma ọ bụrụ na ị mụtaghị ihe ọbụbụenyi pụtara n'ụlọ akwụkwọ, ị mụtabeghị ihe ọ bụla.
Ezi enyi bụ onye nọ gị mgbe ha nwere ike ịnọ ebe ọ bụla.
Nkọwa enyi bụ onye na -asọpụrụ gị ọbụlagodi mgbe ha matara ihe ihere na -eme gị.
Tupu ị chọọ ịkwada onye iro, gbalịa bulie enyi gị.
Ndị enyi dị ka akwụkwọ. Ịkwesighi inwe ọtụtụ, mana ndị kacha mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Nkebi ahịrịokwu kachasị mma maka akaụntụ Instagram gị
Kedu ihe anyị nwere ike ịtụ anya ya na egwuregwu Onye nwe mgbaaka: Ka agha ahụ bido